Ukubekwa kweSilo uMisuzulu kaZwelithini – The Ulwazi Programme
Sekuphinde kwasa nakithi KwaZulu, laphuma lazidela ilanga lakhanyisa ubumnyama obebusisengethe thina kwalokoza nethemba lekusasa eliqhakazile. Isimbuliwe ingubo emnyama ebesiyembathile njengoba sesibekiwe iSilo njengoba besilahlekelwe ubaba wesizwe emuva kokudunguzela kwaso iSilo Samabandla, uNgangezwe lakhe. Sithe sisazilele ukubekwa kweSilo kwabe sekubekwa ibambela ngoba phela isizwe sikaPhunga noMageba besingeke sihlale singenamqaphi sibe umhlambi kazelusile. Esikhundleni sebambela bekubekwe uNdlunkulu wasebukhosini umama wesizwe uNdlunkulu Mantfombi Dlamini Zulu, obesaqaphe isihlalo kusazobekwa iSilo ngokusemthethweni siqokwe. Nalapho ke liphinde lasifuthela ifu elimnyama njengoba kungaphelanga sikhathi esingakanani naye umama uNdlunkulu wasishiya ngokukhulu ukuzuma nalapho futhi sakhala sazithulisa. Ukuhamba kukaNdlunkulu uMaDlamini kusigqeme enkulu ingozi le, kwaphinde kwaphoqa ukuthi kusheshe kulungiswe indaba yokubekwa kweSilo esizoba iso likaZulu sihlale ebukhosini ngokomthetho.
iSilo uMisuzulu kaZwelithini
Ukuhamba kukaNdlulu kushaye kwazwela kuyoyonke indawo njengoba kukhale kwaze kwakhala noNdunankulu wakwaZulu uMntwana wasebukhosini bakwaButhelezi uShenge, othi naye ubesalindele lukhulu kuNdlunkulu ngoba phela uyawazi amagalelo akhe. UMisuzulu inkosana yeSilo uNgangezwelakhe kanye noNdlunkulu uMantfombi Dlamini Zulu, ubekwe esihlalweni ngokusemthethweni emuva kokuba kufundwe amafa akhona ebukhosini kwavela ukuthi nguyena obeqokwe ukuba ahole ubukhosi bakwaZulu. Ubekwe esihlalweni sobukhosi ngomhlaka 07 Meyi 2021.
Uma kubekwa inkosi akuhlali kuba bikho ukungaboni ngasolinye, ingakho kungamangazanga ukuthi kukhona nabanye bakhona ebukhosini endlunkulu akade beyihlaba beyihlikiza eyokubekwa kweSilo uMisuzulu kaZwelithini, okuze kwasiza ukungenelela koMtwana wakwaPhindangene ophinde abe uNdunankulu wakwaZulu exazulula ukungaboni ngasolinye.Ngemuva kokubekwa kweSilo kube sekunxuswa uZulu ukuba abe mhlathimunye kubanjiswane kubhekwe phambili. ISilo uMisuzulu kaZwelithini ufunde esikoleni samabanga aphansi esibizwa ngokuthi i-Assembly of God Primary School, kwathi ngonyaka ka-1985 wabe esefunda eRoseland Primary School, okwathi ekuhambeni kwesikhathi wabe eseyofunda phesheya kwezilwandle ezweni laseMelika lapho akenze khona iziqu ze-International Relations.